Jerena Avy Any Azia Afovoany, Mila Hitovy Dika Bebe Kokoa Amin’ny Endrika Demaokrasia Ao Amin’ny Faritra No Hita Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Jerena Avy Any Azia Afovoany, Mila Hitovy Dika Bebe Kokoa Amin'ny Endrika Demaokrasia Ao Amin'ny Faritra No Hita Any Etazonia
Voadika ny 04 Novambra 2016 1:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Български, English
Hillary Clinton sy Donald Trump. Sariitatr'i Clinton namboarina avy amin'ny saripika tao amin'ny Flickr an'ny Media-n'ny Azia Atsinanana sy Pasifika, natao ho an'ny sehatry ny daholobe. Ny vatany nalaina tamin'ny sary iray tao amin'ny Flickr an'ny Departemantam-panjakana amerikàna, sehatra natao ho an'ny daholobe. Ity sariitatr'i Donald Trump ity indray dia narafitra avy amin'ny sary tao amin'ny Flickr an'i Max Goldberg nampiasàna lisansa Creative Commons . BY: DonkeyHotey (CC BY-SA 2.0)
Ny harivan'ny fifidianana manandanja indrindra, lafo vidy indrndra eto an-tany, manana bàla marobe tokoa ireo mpitondra mandra-maty ao Azia Afovoany, hoentina hifandaharana momba ny soatoavin'ny rafitra fifaninanana ara-politika ao an-toerana.
Ho an'ireo mpitondra efa naharitra ela tao amin'ilay faritra sovietika taloha, izay miaro fatratra ny ‘fahamarinan-toerana’ tsy misy endrika akory sy tsy refesi-mandidy indraindray manoloana ireo hetsi-panoherana tsy fahita firy momba ny vokatry ny fifidianana ary ny zo fototry ny isam-batanolona, ny fampielezankevitra amin'izao fotoana izao ataon'ireo hofidiana ho filoha amerikàna, mihoatra lavitra noho ireo izay efa nisy talohany, dia mampiseho ny fitaonana ananan'ny fanaitairana ny vahoaka, ary na ny fifaninanana politika tsotra monja aza, eo amin'ny fiarahamonina iray.
Ankoatr'izay, tsy ijerena na iza na iza milaza ho mpandresy amin'ny 8 Novambra, dia ho afaka hahita zavatra momba ny rafitra manokan'ny firenen-dry zareo ao anatin'izay Filoha Amerikàna vaovao eo ireo olompirenena ao amin'ireo “Stans” dimy. Mety ho lasa lavitra mihoatra ny fikorotsahan'ny fitokiana nananan'ny sasany tamin-dry zareo tamin'ny demaokrasia amin'ny dikany nentim-paharazany ny fiantraikan'izay fanekena izay, ary toetra tsy matoky latsaka lalina any anaty raha ny fandraisana anjaran'ny vahoaka amin'ny politika no resahana.
Hilary Clinton: Fifandimbiasana Taranaka Malaza Amin'ny Politika
Raha toa lasa filohan'i Etazonia manaraka eo, araka ny niandrandràna azy, i Clinton sekreteram-panjakana taloha, dia hanamafy ny fijery—efa nohamafisina taorian'ny fitondran'i George H. W. Bush sy George W. Bush— hoe mibahana toerana amin'ny politkan'i Etazonia ireo fianakaviana matanjaka azo isaina amin'ny rantsan-tànana sy afaka miditra anatinà loharanom-pamatsiana vola tsy manam-paharitàna mba hanaovanay fampielezankevitra politika.
Eo, mba ho atao, ny fampilaharana amin'ireo firenena toa an'i Azerbaijàna, izay nandimbiasan'ny Filoha Ilham Aliyev ny rainy nodimandry, Heydar Aliyev, efa ho taompolo iray mahery izao, sy Kazakhstàna, izay maro no mahita an'i Dariga, 77 taona, zanaka vavin'ny Filoha Nursultan Nazarbayev ho tsara toerana handimby azy.
Afaka iadiana hevitra ny amin'ny hoe vonona i Clinton handray ny fahefana amin'ny alàlan'ny latsabato fa tsy noho ny fahafatesan'ny olona dimbiasany i Clinton. Tsipihan'ireo fifanakalozan-dresaka misy ao Azia Afovoany ny zavamisy hoe ao Etazonia, na teo aza ny fepotoana fiasàna in-droa nananan'i Barack Obama, ny harena no nanosika ireo fianakaviana ireo hahazo fahefàna fa tsy ny vahoaka.
Mahatsikaiky, mandefitra kokoa amin'ny resaka fifandimbiasan'ny taranaky ny fianakaviana politika ny ao Etazonia miohatra amin'ireo firenena fahiny tao anatin'ny Firaisana Sovietika. Any Kyrgyzstàna, samy natosika hiala avokoa na ny Filoha Askar Akayev, na ny mpandimby azy, Kurmanbek Bakiyev, rehefa nanandrana ny hampiditra fianakaviana tao amin'ny fitondràna. Ao Ozbekistàna, ny fandimbiasana ny filoha, tsy ela akory izay, dia toa nandika ny fankahalàna ny taranak'ilay filoha nodimandry Islam Karimov, akon'ny dingan'ny fifandimbiasana izay nitranga tany Tiorkmenistàna tamin'ny 2006, izay noitehirizana ny fianakavian'ny filoha tsy ho takatry ny mason'ny vahoaka. Ny taranaky ny filoha, i Dariga Nazarbayeva, 53 taona, tao Kazakhstàna, ary Rustam Imomali, 28 taona, tao Tajikistàna irery ihany no nahavita nanome an'i Azia Afovoany ny fahafahana manakatra ny toerana misy ireo “fianakaviana politika” any Etazonia.
Donald Trump: Toa endrika mahazatra izany ianao
Na dia toa fanipazana sakana maro isanandro vaky aza ny diany ho any amin'ilay Lapa Miendrika Atody, misy kely ihany ny vintana hitakian'ny olona iray solotenan'ireo mpanavakavaka, volonkoditra, ny lahy sy ny vavy, sy tsy ampy fanahy, ho lasa filoham-pirenena fa tsy i Clinton. Mety ho i Trump no voalohany amin'io karazana io ao amin'ny Trano Fotsy, vely kobay ho an'ireo liberaly ao Azia Afovoany miezaka ny hanome tohankevitra hoe tena tsy misy itoviany mihitsy ny politikan'ny Tandrefana sy an'ireo “Stans”.
Mpamakafaka iray avy ao anatin'ny faritra no efa nampitovy sahady an'i Trump ho toy ny Trumpmenbashi—lalao iray fanomezana anarambosotra ho an'ny tena, nataon'ilay filoha voalohany tao Turkmenistàna, Saparmurat Niyazov, efa nodimandry, izay izy ihany no nilaza ny tenany ho Turkmenbashi, na Rain'ny Turkmen. Ary ny fisisihan'i Trump amin'ny fananganana tilikambo goavana be sy rindrina hanoherana ireo mpifindra monina dia fitaratra midadasika ijerena ny asa fanorenana atosik'ireo mpitarika manerana ny faritra Azia Afovoany. Norahonan'i Trump ho gadraina ihany koa i Hilary Clinton, akon'ny toepo mpandàla ny fanagadrana nironan'ireo mpanao politika tany amin'ny Firaisana Sovietika taloha ho fomba fanao amin'ireo mpanohitra an-dry zareo.
Na dia lazaina fa malaza amin'ny faritra sasany any Maosko aza i Trump, maro amin'ireo aziatika tanivo no mahatsapa hoe voalohany indrindra dia mpandraharaha tonga mba hamorona tontolon-dalàna sy politika iray hahafahan'ny fandraharahàny mibodo toerana izy. Tsy dia samihafa loatra, araka izany, amin'ny karazana ‘tin pot’ mpanao jadona izay efa fantatr'izy ireo tsara mihitsy.
Fepotoana fanintelo hiasàn'i Obama?
Na dia fosafosaina sy aely any anatin'ireo tranonkalam-baovaon'ny mpifikitra amin'ny nentindrazana aza, tsy marina raha ny tena izy ny filazàna hoe niteny i Barack Obama, filoha mamarana ny fotoam-piasàny, fa tsy hitsahatra izy raha toa ka i Trump no mandresy amin'ny 8 Novambra, ary hojereny izay fahabangàna ao anatin'ny lalàmpanorenana hahafahany mijanona eo amin'ny fitondràna mandra-pisian'ny fifidianana faharoa hatao.
Kanefa raha io no zavamisy, io no mety ho karazana hakingan-tànana politika izay efa mahazatra loatra ireo vahoaka ao Azia Afovoany ny mahita azy. Tamin'ity taona ity, na i Tiorkmenistàna, na iTajikistàna, dia samy nanatsara ny lalàm-panorenan'izy ireo mba hanomezana hery ireo mpitarika eo am-pamaranana ny fepotoana fiasàny, raha mbola fifandirana goavana kosa no sedrain'ny lalàmpanorenana ao Kyrgyzstàna amin'izao fotoana izao.
Raha zavatra toa tsy ho azo eritreretina izany Obama hijanona ao amin'ny biraony izany, io no mety ho fanomezana tonga lafatra ho an'ireo mpandarondaroka tsy mety trotraka ny lalàmpanorenana ao Azia Afovoany. Ho an'ny tanjona fampielezankevitra politika feno fitaka ataon-dry zareo, anefa, samy mety daholo na i Trump Lehibe, na i Clinton Faharoa.